Ahoana ny fomba hampitomboana ny fampiroboroboana ny mpihaino sy hahazoana tamberina | Martech Zone
Ny famoronana buzz manodidina ny orinasa iray ary hahatonga ny mpihaino anao ho liana amin'ny vokatrao na serivisinao no dingana voalohany amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina tsy mivadika. Amin'ny fotoana fohy, mety hitarika amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana sy ny varotra izany. Amin'ny fotoana maharitra, ity dia afaka mametraka legiona ambasadaoro marika izay miasa tahaka ny ekipa mpivarotra guerilla. Satria ny fandresena ny fon'ny demografikao dia miankina betsaka amin'ny fandraisana anjaran'ny mpihaino, zava-dehibe ny fampiasana mahomby fampiharana fanao ary mahazoa hevitra. Ireto misy torohevitra vitsivitsy izay hanampy anao hanapotika azy ary hampivoatra ny orinasanao.
Indraindray, ny zavatra ilain'ny olona rehetra dia ny fandanjalanjana kely sy fandresen-dahatra an-kolaka mba hahazoany antony manosika. Vokatr'izany, ny fahatakarana ny herin'ny antso ho amin'ny hetsika sy ny fampiharana azy ireo dia afaka manatsara ny fifandraisan'ny mpihaino haingana. Rehefa mamorona atiny marketing, zava-dehibe ny fitrandrahana ny asanao mafy amin'ny alàlan'ny fampidirana karazana antso ho amin'ny hetsika mba hahatonga ny mpihaino anao handray ny dingana manaraka. Mety hamaly ny fanontaniana iray any amin'ny faran'ny lahatsoratra bilaogy ity mba hiteraka adihevitra na hahatonga ny mpitsidika hanao sonia mailaka mailaka hahafahanao mamorona fifandraisana akaiky kokoa.
Rehefa mampiasa antso ho amin'ny hetsika ianao dia zava-dehibe ny hametrahana izany amin'ny toerana marina ary avelao izy hanaraka fivoarana lojika. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, apetraka amin'ny faran'ny atiny aorian'ny nanomezanao lanja sy / na valina fanontaniana iray. Rehefa avy nanaporofo ny tenanao ho manam-pahalalana sy azo itokisana ianao dia tokony hahatsapa ho mahazo aina kokoa ny mpihaino anao amin'ny fiankohofana. Ity no fotoana mety indrindra hampidirana antso ho amin'ny hetsika sy hahatonga ny olona hifandray amin'ny sehatra sasany.
Miezaha ho olona
Na dia lasa mandeha ho azy aza izao tontolo izao sy ny fomba fandraharahana ary tsy dia namboarina manokana tato ho ato, ny ankamaroan'ny olona dia maniry hatrany ny fikitihan'ny olombelona. Na manao ahoana na manao ahoana fandrosoana ara-teknolojia hahatongavantsika, ny orinasa tsara dia mifototra amin'ny fifandraisana sy ny famoronana fifandraisana amin'ireo mpanjifa. Izany no mahatonga ny famelana ny toetranao hamiratra amin'ny atiny sy ny maha-olona anao dia manararaotra izaitsizy. Aleo mangarahara ao anaty alokaloka fa aleo mangarahara ary avelao izy ireo hahafantatra anao amin'ny sehatra manokana. Azo atao amin'ny fomba isan-karazany izany:
Mampiasa feo mahafinaritra rehefa mamorona atiny
Fisorohana ireo jargon sarotra be loatra izay mety tsy ho takatry ny mpihaino anao
Miezaka ny tsy ho sendra miseho ho mihambo
Mamaly haingana ny fanehoan-kevitra sy ny fanontanina
Mamolavola fomba tokana mampiavaka anao amin'ny mpifaninana
Azonao atao koa ny mampiditra sary vitsivitsy momba anao sy ireo mpikambana ao amin'ny ekipa mandray anjara amin'ny hetsika ivelan'ny orinasa. Amin'ny famelana ny mpihaino hahafantatra anao amin'ny sehatra manokana kokoa, ny fananganana fifandraisana dia tokony ho lasa mora kokoa ary tokony hitombo ny fifamofoana.
miaraka 56 isan-jato ny olona eto amin'izao tontolo izao izay mampiasa karazana haino aman-jery sosialy, tsy mora velively ny mora azo. Amin'ny alàlan'ny fanamorana izany ho an'ny demografikao hahitana ny orinasanao sy hijanonana havaozina, azonao atao ny mitazona azy ireo hifanaraka tsy tapaka. Matetika izy io dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny mihazakazaka manan-tsaina fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy ary mampiasa tranonkala isan-karazany. Ny maha-eo amin'ny tranonkala maro dia zava-dehibe satria mamela anao hahatratra ny isan-jato lehibe indrindra amin'ny mpihaino anao. Izy io koa dia manangana tambajotra ho an'ny fanatonana an-tserasera rehetra izay manampy amin'ny marika. Raha tsy izany, ny fifikirana amin'ny tamba-jotra iray na roa ihany dia mety hampihena ny fiantraikany sy ny firotsahana.
Rehefa manomboka, ny ankamaroan'ny orinasa dia manomboka amin'ny safidy lojika indrindra ary mamorona profil ao amin'ny Facebook sy Twitter. Raha mitady tambajotra miaraka amina matihanina orinasa hafa ianao, dia manararaotra ny LinkedIn sy Google+. Ho an'ny marketing centric sentric, Pinterest, Instagram ary Tumblr dia safidy tsara. Youtube dia mety amin'ny fampidirana horonantsary. Misy ihany koa ireo tranokala fanoratam-boky sosialy toy ny Reddit, Stumbleupon ary Digg izay afaka mitondra azy na dia dingana iray lavitra aza.
Ento ny mpihaino anao amin'ilay hetsika
Ny olombelona dia manana faniriana voajanahary ho tafiditra ao, koa ny fanararaotana an'io faniriana io dia mety hahasoa. Ohatra, ny famporisihana ny mpamaky hamaky lahatsoratra amin'ny bilaogy ary hanomboka fifanakalozan-kevitra dia mety hametraka ambaratonga fampidirana. Ny fanaovana izany dia mamono vorona roa miaraka amin'ny vato iray satria ahafahanao mifanerasera amin'ny mpamaky sy ny mpamaky anao hifampiresaka. Mandritra izany fotoana izany, io no làlana lavorary hahazoana tamberina sarobidy.
Ho an'ny orinasa mifototra amin'ny vokatra dia azonao atao ny mangataka amin'ny mpanjifa handefa ny sarin'izy ireo mampiasa ny vokatra ary handefa izany amin'ny tranokalanao na ny mombamomba ny media sosialy. Hevitra iray hafa ny fanaovana fifaninanana izay ahazoan'ny mpandresy loka vola, kupon na vokatra maimaim-poana. Ny tompona trano fisakafoanana iray dia mety hangataka amin'ny mpanaraka Facebook hanome hevitra momba karazana tsindrin-tsakafo vaovao. Izay nanolotra ny hevitra voafidy dia hahazo loka maimaimpoana.
Ny maha-zava-dehibe ny valiny
Mba hisorohana ny hadisoana mahatsiravina ary hametrahana ny orinasanao eo amin'ny làlan'ny fahombiazana dia zava-dehibe ny fahazoana valiny tsy miangatra avy amin'ny mpihaino anao. Na dia mety tsy hahafinaritra foana ny maheno fanehoan-kevitra ratsy, ny fanakianana manorina kosa dia afaka milaza aminao izay fanitsiana tokony hatao. Etsy ankilany, ny fanehoan-kevitra tsara dia hampiseho aminao izay ataonao tsara mba hahafahanao manasa sy mamerina. Ireto misy hevitra vitsivitsy ahazoana hevitra.
Boaty na endrika fanamarihana
Ity angamba no safidy mahitsy indrindra ary tonga lafatra amin'ny fizahana faritra misy olana. Ho an'ny mpampiasa WordPress, misy plugins marobe misy, izay hametraka boaty na forme feedback. Matetika, izy ireo dia tokony hapetraka ao amin'ny sidebar ho toy ny widget na ho pejy tsirairay eo ambanin'ny lohatenin'ny tranokala. Ny sasany mamela ny fanehoan-kevitra tsotra fotsiny, ary ny hafa saro-pantarina kokoa ary mamela ny mpihaino anao hanombatombana fepetra manokana amin'ny orinasanao.
Ny fanadihadiana dia fomba tsara hamaritana ny fahafaham-po ankapobeny amin'ny mpihaino sy ny mpanjifanao. Izy ireo koa dia iray amin'ireo fomba mora indrindra hahitana lamina tsara sy ratsy. Amin'ny fampiasana sehatra toa Survey Monkey, azonao atao ny mamorona fanadihadiana izay miavaka amin'ny orinasanao. Aorian'ny famoronana fanadihadiana, fandatsaham-bato na fanontaniana dia azo alefa amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny mailaka, Twitter, fifandraisan'ny mpanjifa, sns. Satria maro ny olona manana fiainana be atao ka tsy te-hameno ny fanadihadiana lava be, matetika no tsara indrindra ny mitazona azy ireo tsotra tsy misy mihoatra ny 10 fanontaniana. Na dia, araka ny KISSmetrics, ny fanadihadiana tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy fanontaniana dimy. Vokatr'izany dia fahendrena ny mametraka fanontaniana lehibe fotsiny izay azon'ny olona fenoy haingana.
Ary farany, ny fampiasana sehatra manahirana amin'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpihaino dia afaka manome anao fahalalana sarobidy. Ny lalam-pifidianana ho an'ny orinasa maro dia Google Analytics satria maimaim-poana, mora ampiasaina ary tena feno.
Mampiseho angon-drakitra marobe ao anatin'izany ny fitenin'ny mpampiasa sy ny toerana misy azy, ny loharanom-pifamoivoizana, ny halavan'ny fotoana ijanonan'ny mpampiasa eo amin'ny tranokalanao sy ny fitaovana ampiasain'ny mpihaino anao hidiranao atiny. Misy pejy anatiny ihany koa Analytics izay mampiseho izay faritra amin'ny tranokala no mahazo fipihana betsaka indrindra.
Fampahalalana ho an'ny orinasa ary fanodinana data dia faritra roa izay lasa manan-danja kokoa ihany koa. Ny fanangonana sy famakafakana ny angon-drakitra momba ny hevitry ny mpanjifa (ary koa ny fihetsiky ny mpampiasa, ny angon-drakitra tsindrio, ary maro hafa) dia tena ilaina amin'ny famaritana ireo olana sy fotoana mety, avy eo mampiasa izany.
Mikasika ny SEO, Google Analytics dia manome lisitry ny teny lakile izay napetrak'ireo mpampiasa hahitana ny atiny. Ity sehatra ity koa dia manapotika ny atiny tsirairay avy mba hahafantaranao hoe iza amin'ireo lahatsoratra no mahazo fahitana betsaka indrindra. Amin'ny alàlan'ny fampiarahana ireo data rehetra ireo dia afaka mahazo valiny mivaingana ianao hanampiana amin'ny famoronana atiny sy ny varotra ho avy.
Tags: fampivoarana ny mpihainoSocial Media Marketing
Ny torolàlana 5 minitra hahazoana asa eo amin'ny media sosialy
6 Jun 2013 amin'ny 7:58 AM
ny fampiasana sehatra manahirana amin'ny famakafakana ny fihetsiky ny mpihaino dia afaka manome anao fahalalana sarobidy.